China 1100 Aluminum Circle Manufacturer - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Shuanglin Jiate dia mamokatra ny 1100 Aluminium Circle izay mahafeno ireo fenitra ambony indrindra raha mamonjy ny vidiny. Ny fepetra fanaraha-maso matanjaka tsara dia mitondra anao ireo vokatra mendrika indrindra. Ary miaraka amin'ny fitaovam-pomba ofisialy, ary ny orinasam-panjakana, dia tokony hilaza isika, ho takatrao hoe nahoana no misy orinasa maro be misafidy an'i Shuanglin Jiate ho mpamatsy azy ireo. Shuanglin Jiate aluminie mifanaraka amin'ny YS / T 429-2000 (fenitra indostrialy Shinoa), GB / T 3880, EN485, ASTM B209.
Email: [mailaka voaaro]inum.com [mailaka voaaro]